पशुपति शम्शेरको सूत्रः मधेसमा दुई प्रदेश, पश्चिम तराईबाट पहाडी जिल्ला अलग गर्नुपर्छ - Pahilo News
पशुपति शम्शेरको सूत्रः मधेसमा दुई प्रदेश, पश्चिम तराईबाट पहाडी जिल्ला अलग गर्नुपर्छ
१२ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । मधेसी दलहरुले उठाउँदै आएको धारणा जस्तै उनले पूर्वमा एक र पश्चिममा एक गरी मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
बुधबार दशैँ, तिहार र छठका अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग आयोजित शुभकामना कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले त्यसरी सम्बोधन गर्दा मधेसी दलहरुको धारणा सम्बोधन हुने बताए । उनले भने, ‘पूर्वमा मधेसकै मात्र एक प्रदेश हुन हुने, पश्चिममा चाहिँ किन नहुने ? पश्चिमको प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा केही पहाडी जिल्लाहरु हालिएको छ, तिनलाई हटाउनुपर्छ ।’
उक्त अवसरमा अध्यक्ष राणा र सञ्चारकर्मीबीच भएको प्रश्नोत्तर
० संविधान संशोधनका बारेमा तपाईंको पार्टीको धारणा के छ ?
संविधान संशोधन हुनुपर्छ । मधेसी, जनजाति आदिलाई चित्त नबुझाएर संविधान कार्यान्वयन हुँदैन ।
० त्यसो भए मधेसी दलहरुले उठाएका मागहरुसँग सहमत हुनुहुन्छ ?
संविधान संशोधन हुनुपर्छ भने पनि केही विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्पष्ट धारणा छ । जस्तो– अंगीकृत नागरिकलाई मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने धारणासँग राप्रपा सहमत छैन । कामकाजको भाषा नेपाली नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ ।
० प्रदेशको सिमानाका बारेमा ?
त्यसमा चाहिँ मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ, पूर्वमा एक र पश्चिममा एक । पूर्वमा भइसकेको छ । अब पश्चिममा पनि तराईको एउटा प्रदेश बनाउनुपर्छ । अनावश्यक रुपमा पहाडका केही जिल्ला जोडिएको छ, तिनलाई हटाउनुपर्छ । पूर्वमा हुने, पश्चिममा नहुने के छ र ?
० अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन होला त ?
विधेयक पेस गर्न गाह्रो छैन, तर पारित गर्न गाह्रो छ । यसका लागि सम्वाद अघि बढाउनुपर्छ ।
० स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
स्थानीय तह पुनःसंरचनामा तीन दलले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य छैन । अहिले भएकै निकायको चुनाव गर्नुपर्छ । स्थानीय निकाय कस्तो हुने भन्ने चाहिँ पछि प्रान्त बनेपछि उनीहरुलाई नै तय गर्न दिनुपर्छ ।